Ukuphupha u-Allee Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-avenue ihlala isitrato esime macala omabini yimigca emide yemithi. Imithi eqhelekileyo yelavenithi yimithi yekalika. Kodwa uhlala uhlala ubona i-oki, i-chestnut okanye i-beech imithi emi kwi-avenue. Igama livela kwigama lesiFrentshi elithi "aller", elithetha "ukuhamba" kwaye libonisa imvelaphi yendlela. Kungenxa yokuba kumaxesha angaphambili, indlela yayisetyenziselwa ukuchaza indlela esegadini eyiliweyo.
Namhlanje indawo ijongeka ngakumbi njenge-boulevard. Bahlala befumaneka kwiipaki okanye kwizigodlo ezinesidima, njengeendlela zokufikelela. Kodwa nakummandla wezakhiwo zembali, iindawo zokuhlala okanye emaphandleni avulekileyo, indlela entle kangaka yomthi inokubonwa kaninzi. Ujoliso alugcini kubuhle bendlela. Imithi ikhusela elangeni, emoyeni nasemvuleni, kwaye, ngenxa yohlaza lwayo, ikwasisandi sendalo ngokupheleleyo.
Kodwa kunokuthetha ukuthini xa uphupha ukuhamba phantsi kwe-boulevard enomthi? Ngaba umfanekiso wephupha elithi "Allee" unokuchazwa ngcono njani?
1 Uphawu lwephupha «Allee» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Allee» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Allee» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Allee» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ngamanye amaxesha indawo ephambi kwethu injengendlela ethe cwaka ephupheni. Ukuba umntu ujonge kubo el mundo amaphupha, oku kuthetha, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, elinye elinye indlela ende yobomi ulele phambi komntu ophuphayo.
Ukuba umntu wayehamba ezantsi ephupheni okanye ehamba ngayo njengepaseji, oku kubonisa iphupha lokuba ulandela izicwangciso zakhe ngokuzimisela okukhulu kwaye uzisebenzisa ngokungagungqiyo kwaye uhlala ethe tye. Unengqondo kunye neliso lezinto ezintle ebomini.
Mhlawumbi uye waqhuba i-avenue ngemoto okanye ngebhayisekile kwaye mhlawumbi ubunaye umntu onaye? Ngokusisiseko umntu uyayichaza le meko yamaphupha njenge imiqondiso elungileyo malunga nothando. Unokulindela iiyure ezithandekayo kunye nothando kakhulu.
Ukuba uyazi ukuba ngubani onaye ecaleni kwakho ngelixa uqhuba i-avenue, kuya kufuneka ucinge ngendima ayidlalayo lo mntu ngokwenyani. Kungenxa yokuba nokuba yayingelilo iqabane elinothando, lo mfanekiso uphupha ubonakalisa unxibelelwano olumnandi kakhulu nalo mntu.
Ukuma ngesiquphe kwindlela kwaye ujike kukukhumbuza ngephupha, okwangoku iindiza cinga kwakhona. Indlela yobomi bethu ayisoloko ihamba ngokuthe ngqo. Ngamanye amaxesha kuya kufuneka uhambe ngeendlela ezingaziwayo ukufikelela kwinjongo yakho (yobomi).
Ukuba uyeva umnxeba we-oriole kwi-avenue, unokoyika umcimbi ozayo.
Uphawu lwephupha «Allee» - ukutolikwa kwengqondo
Indlela ethe tye kwaye efileyo ifumaneka kutoliko lwamaphupha ezengqondo ukwenza lula kunye nobomi obungenakukhathazeka. Ukuba uwedwa kule avenue, akufuneki woyike ukukhubeka okanye ubunzima obukhulu.
Ukuba i-avenue ibaleka kwi-arc, oku kulandelelana kwamaphupha kubonisa utshintsho kumbono. Iitoliki zamaphupha zikwabona kwicala le-arc, umkhondo wephupha. Ukuba i-avenue ibalekela ngasekhohlo, umntu utyekele ngakumbi ekulandeleni intliziyo. Ukuba uqhuba ngasekunene, uhlala uthathela ingqalelo le nto ikuxelela yona ingqondo yakho.
Uphawu lwephupha «Allee» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha "Allee" ubhekisa kwimeko engaphaya koku ulwalathiso lokomoyakufuneka bathathe amaphupha.